Aiza no hijerena ilay Forever Purge amin'ny Internet? Ny antsipirian'ny streaming, ny fotoana maharitra ary maro hafa - Pop-Kolontsaina
Aiza no hijerena ilay Forever Purge amin'ny Internet? Ny antsipirian'ny streaming, ny fotoana maharitra ary maro hafa
Ny sarimihetsika farany amin'ny franchise The Purge, The Forever Purge, dia navoaka tany Etazonia androany. Na dia nahazo fanehoan-kevitra mifangaro avy amin'ny tsikera aza ilay sarimihetsika, tsara ny valintenin'ny mpijery ankapobeny. Ny Forever Purge dia nahazo Score Score an'ny 78% amin'ny Tomaty Rotten.
Ny fizarana fahadimy amin'ny andian-tsarimihetsika dia ny tohiny mivantana amin'ny sarimihetsika 2017, The Purge: Election Year. Ilay mahatsiravina sarimihetsika hetsika mamarana ny andiany dystopian horonantsary mampihoron-koditra fa ny The Purge dia nanomboka tamin'ny taona 2013. Ny sarimihetsika fahadimy ao amin'ny franchise The Purge dia efa hita any amin'ny teatra manerana an'i Etazonia ankehitriny.
Avelao hanomboka ny korontana. #TheForeverPurge dia milalao amin'ny teatra ankehitriny. Makà tapakila izao: https://t.co/3ShK3WqWCv pic.twitter.com/dOSBBf2CYw
dia rey mistery ao am-ponja
- Ilay fanadiovana mandrakizay (@UniversalHorror) 2 Jolay 2021
The Forever Purge: pitsopitsony momba ny streaming, famotsorana Global, ary maro hafa
Misy ve ilay Forever Purge amin'ny sehatra streaming rehetra?
Nahazo famoahana teatra ihany ny The Forever Purge (Sary tamin'ny alàlan'ny Universal Pictures)
Ny famoahana horonantsary horonantsary dia tsy nahazo afa-tsy famoahana teatra tany amin'ny firenena manokana. Ny sarimihetsika dia mbola ho avy amin'ny sehatra OTT toa an'i Netflix, Amazon Prime, Hulu, ary HBO Max. Ny mpijery dia mila miandry ela kokoa vao ho tonga ny nomerika.
tom vahiny jamie lee Gordis son
Rahoviana no halefa nomerika ny Forever Purge?
Tsy mbola nisy fanamafisana ofisialy avy amin'ny ankolafy mpamokatra. Mbola afaka manantena famotsorana ofisialy ihany ireo mpijery, 17 andro aorian'ny famotsorana an'i Etazonia
Vakio ihany koa: Ao amin'ny Disney Plus ve ny Boss Baby 2?
Rahoviana no halefa The Forever Purge any UK, Canada, France ary ny firenena hafa?
Ny Forever Purge dia mbola tonga amin'ny firenena maro manerantany (Sary avy amin'ny Universal Pictures)
Ny sarimihetsika fampihorohoroana amerikana dia andrasana hivoaka any Canada amin'ny 9 Jolay 2021, raha ny UK, Espana ary Irlanda kosa dia miandry ny 16 Jolay. Any amin'ny firenena toa an'i Frantsa, Alemana ary Singapour, andrasana ny fahatongavan'ny sarimihetsika amin'ny 4 aogositra 12 aogositra sy 26 aogositra.
ny fomba hampandeha haingana ny asa
Ana de la Reguera milalao Adela (Sary avy amin'ny Universal Pictures)
Ny kintana Forever Purge dia i Ana de la Reguera sy i Tenoch Huerta ho an'i Adela sy i Juan tsirairay avy. Josh Lucas, Cassidy Freeman, ary Leven Rambin dia hita fa samy Dylan Tucker, Cassie Tucker, ary Harper Tucker. Mpikambana hafa ao amin'ny The Purge: tohin'ny Taom-pifidianana dia misy:
Alejandro Edda amin'ny maha T.T.
Will Patton ho Caleb Tucker
Veronica Falcon amin'ny maha Lydia
Will Brittain toa an'i Kirk
Sammi Rotibi ho Darius
Inona no antenaina avy amin'ny The Forever Purge?
Mbola avy amin'ny The Forever Purge (Sary avy amin'ny Universal Pictures)
Ny horohoro henjana ny hetsika dystopiana dia hanaraka ny mpivady Meksikana Adela sy Juan, izay mandositra noho ny fivarotan'ny zava-mahadomelina. Miala amin'ny toeram-piompiana any Texas izy mivady, amin'izay tsy alehany. Miharatsy ny toe-draharaha rehefa mihaza ny mpivady mpifindra monina ataon'ny fikambanana mahafaty iray izay te-hanangana ny Purge.
Vakio ihany koa: Firy ny sarimihetsika Halloween?
ahoana ny fiantraikan'ny olan'ny fandaozana eo amin'ny fifandraisana
ahoana no ilazana raha misy vehivavy te anao
lalao wwe tsara indrindra amin'ny 2016
john studd lehibe vs andre ilay goavambe